एक बारको जूनी हाँसेरे बिताऊँ सम्झना विश्व हाँसो दिवसको – SajhaPana
एक बारको जूनी हाँसेरे बिताऊँ सम्झना विश्व हाँसो दिवसको
साझा पाना २०७७ वैशाख २१ गते १३:०२ मा प्रकाशित
काठमाडौं ।आज विश्व हाँसो दिवस ।यो दिवस मनाइनुले पनि हाम्रो जीवनमा हाँसोको महिमा र गरिमालाई उचो बनाउँछ नै ! त्यसो त ‘ जो हाँस्न जान्दैनन् ती बाँच्न जान्दैनन् ’भन्ने भनाईले जीवनको बाँच्ने कलालाई इन्गित गरेको भान हुन्छ । तसर्थ अर्थपुर्ण जीवन बाँच्नको लागी हाँस्नु निकै महत्व्पूर्ण कुरा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । अनि यथार्थमा त यही हो ।
हाँस्नु स्वस्थ्यको लागी निकै लाभदायक छ ।हाँसोले हाम्रो स्वास्थयमा निकै प्रभाव पार्दछ । यो एक सच्चाइ पनि हो । जब हामी हाँस्छौं यसबाट , हाम्रो फोक्सोलाई व्यायाम पुग्दछ । हाँसोले मुुटु , मन , मस्तिस्क लगायत समस्त स्नायु –मण्डलमा नै प्रभाव पारि सिङ्गो शरीरका अंग ,प्रत्यंग झंकृत गराउँदछ । यसो विचार गरौ त तपाइँ हामी मध्येमा पनि विभिन्न तरिकाले हाँस्ने छौ नी हैन त ?
कोही मुसुक्क हाँस्छौ ,कोही खित्का छाडेर हाँस्छौ , सकैको हाँसो अट्टाहस हुन्छ त कोही मनमनै हाँस्ने स्वभावका हुन्छौ ।जो जसरी हाँसे पनि हाँसो भने अमुल्य छ है । तर यसमा खर्च भने कत्ति पनि हुदैन ।
हाँसोले रगत रक्तसञ्चार प्रकृयामा समेत योगदान पु¥याउँदछ र हाम्रो स्वस्थ्यमा बुद्धि गर्दछ । जब स्वास्थ्यमा बुद्धि हुन्छ , तब शरीर र मनमा तागत बढ्दछ । उत्साह बढ्छ र कार्यक्षमतामा बुद्धि भई सफलताको सिंढीमा चढ्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
हँसिलो व्यक्तित्वलाई सबैले मन पराउँछन् । सबैले माया गर्छन । हंँसिला मानिसहरु र उनिहरुको कार्य सबैले सधैं याद गरिरहन्छन् । हँसिलो मुहार सधै प्रिय हुन्छ । वास्तवमा हँसिलो अनुहार साह्रै सुन्दर पनि देखिन्छ ।
वास्तवमा प्रेम ,स्नेह , खुशी जस्ता कुराहरु जति धन तिरेपनि अवश्यक परेका वेला किन्न सकिने चिज होइनन् । मुस्कान पाउनेले आनन्द पाउँछ र दिनेको केही घटदैन पनि । मुस्कान थकितहरुकालागी आराम हो , निराशहरुको लागी आशा हो , दुखीमनहरुका लागी यो एउटा अचुक औषधी नै हो ।
तपाई हामो हाँसो भरिलो होस । प्राकृतिक होस । मधुर होस् अनि साँचो होस् । दिन भरिको थकानले कहिलेकाहीं तपाईंका नजिककाले तपाईंलाई मुस्कान दिन नसक्लान । बरु तपाईं नै उनिहरुलाईं मुस्कान दिने की ! ल, अब मौका मिल्दासम्म मज्जाले दिल खोलेर हाँसौ । अरुलाई पनि हसाऔं । बाँचौ अनि बचाऔं । हाम्रो साझा पाना अनलाइन न्युज पोर्टलसँग जोडिनुभएका तपाईं सबैलाई विश्व हाँसो दिवसको शुभकामना !
ट्याग : #विश्व हाँसो दिवस
यी हुन् सेक्स पावर बढाउने घरेलु उपाय
चौधरी ग्रुपका संस्थापक लूनकरणदासको जन्म–शताब्दी, यसरी सम्झिए प्रियजनले
हेर्नुहोस् आज तपाइँको राशीफल
यहाँ हेर्नुहाेस् आज तपाईंकाे राशिफल